कुनै समुदायको उत्पीडत अन्त्य गर्ने कुराको सम्बन्ध राज्यपुनर्संरचनासँग पनि जोडिएका हुन्छन् । विभिन्न जातीहरुले राज्यमा प्रतिनिधित्वका लागि आफ्नो क्लस्टर बनोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा, तपाईंमाथि भने अखण्ड सङ्घीयता पक्षधर भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । ती उत्पीडित समुदायको मुक्तिको जुक्ति तपाईंसँग के छ ? पहिलो कुरा राज्यको पुनर्संरचना भनेको जातीय अलगाव होइन । जुन मानिसहरु जात र संस्कृतिलाई अलग्याउने भन्छन्, त्यो प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त हो । जस्तै काठमाडौंमा नेवार समुदायको बसोवास छ, त्यो समुदायबाहेक अर्को समुदायको पनि त यहाँ बसोबास छ । अब राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भयौँ । नेवार–नेवार एकातिर, बाहुन–बाहुन एकातिर बस अथवा गुरुङ–मगर यता बस भन्न मिल्छ ? यो घोर प्रतिक्रियावादी विचार हो । क्लस्टरको कुरा भनेको नै त्यही हो ।